အဘယ်ကြောင့်လျှောက်လွှာဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်အတူသွားပါ? | Martech Zone
၎င်းသည်ခိုင်မာသည့်အိုင်တီအရင်းအမြစ်များရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်စကားပြောရန်နှင့်၎င်းတို့အား ASP model သို့ ၀ ယ်ရန်ခက်ခဲသည်။ လူအများစုက ASP နှင့်အစဉ်လိုက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီတို့၏ကွာခြားချက်သည်ဖောက်သည်ကိုင်တွယ်ရန်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အခြား application ကိုထိန်းသိမ်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည့်နေရာတွင်အွန်လိုင်းဖြန့်ချိခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းကိုဤနည်းဖြင့်ကြည့်ပါကသူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည် software ကုမ္ပဏီများနှင့်တူသည်။ ၎င်းသည်အမှန်တရားနှင့်မဝေးနိုင်ပါ။ သို့သော်မည်သူကမျှထိန်းချုပ်မှုကိုလက်လွှတ်မခံလိုသောအတွေ့အကြုံရှိအိုင်တီပညာရှင်အား ၄ င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူရှင်းပြရန်ခက်ခဲသည်။
ဆော့ဝဲလ်ကုမ္ပဏီများသည်ဆော့ဝဲလ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုဖန်တီးကြသည်။ Application Service Provider များသည် software ဖြေရှင်းချက်များကိုအသုံးပြုသောစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်သည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲရောင်းချသူသည်အမှားအယွင်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များအတွက်မှီခိုနိုင်သည်။ ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်အချိန်အနည်းငယ်သာကျန်ရှိနေသေးသော်လည်းထုတ်လွှတ်မှုများအားဆက်လက်ထုတ်ဖော်ရန် ASP သည်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုနားလည်ရန်မှီခိုအားထားနိုင်သည်။
ASP တစ်ခုအတွက် Web-based application တစ်ခုကိုမမှားပါနှင့်၊ ၎င်းနှစ်ခုလုံးသည်အလွန်ကွဲပြားသည်။ Gmail သည် web-based application တစ်ခုဖြစ်သည်။ Google Office သည်ဝဘ်အခြေပြုအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆော့ဖ်ဝဲလ်ပြင်ပမှသုံးစွဲခြင်းအတွက်မည်သည့်“ ၀ န်ဆောင်မှု” ကိုမှပေးမထားပါနှင့်။ ASP သည်အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။
ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာက ASPs ကိုမှန်ကန်စွာအမည်ပေးတဲ့သူတစ်ယောက် - Application ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူ။ ASP များသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းနှင့် software ပြproblemနာတိုင်းအတွက်မပြီးပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပြင်ပတွင်အသုံးချခြင်းထက်ဒေသအလိုက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းသုံးဆော့ဝဲလ်များစွာရှိသည်။ Client နှင့်ဆာဗာအကြားအချက်အလက်အမြောက်အများလိုအပ်သော application များသည်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ bandwidth သည်အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်။
Application Service Providers သည်သင့်အား ၄ င်းတို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သောအပြင်လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုသင့်အားပေးသည်။ ASPs သည် software သည်သင်၏စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မည်သို့ကောင်းမွန်စွာပေါင်းစပ်ပြီးဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြု၍ သင်၏စီးပွားရေးရလဒ်များကိုမောင်းနှင်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
ASP ဥပမာတစ်ခု - အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ
ASP တစ်ခုရဲ့ဥပမာကောင်းတစ်ခု အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ။ လိုကုမ္ပဏီတစ်ခု အတိအကျ, စိတ်ကူးစက်မှုလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်များကိုရှိသည်:
သင်၏အီးမေးလ်ကို SPAM အဖြစ်မှားယွင်းစွာသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်သင့်အားနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခြင်းများမဖြစ်စေရန်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အဖွဲ့များ။
ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များသည်စက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုစောင့်ကြည့်ပြီးသူတို့၏ software သည်အီးမေးလ်ဖောက်သည်အားလုံးနီးပါးကြည့်ရှုနိုင်သောအီးမေးလ်ကိုဖန်တီးပေးသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကုမ္ပဏီများနှင့်အမျိုးမျိုးသော application များနှင့်ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောပေါင်းစည်းရေးအဖွဲ့များ။ ပေါင်းစည်းမှုကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မှန်ကန်စွာတီထွင်နိုင်အောင်သူတို့ကအတွေ့အကြုံပေးသည်။
အမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည့် Application Development နှင့်နည်းပညာနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများအားအစွမ်းကုန်မြှင့်တင်ပေးသည်။
နောက်ထပ်ဥပမာ - အွန်လိုင်းမှာယူမှု
စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အွန်လိုင်းမှာယူမှုများဆော့ (ဖ်) ဝဲရောင်းဝယ်သောရှေးရှေးများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အိုင်တီပညာရှင်များနှင့်အတူတူပင်ပါသောအစီအစဉ်များရှိသည်။ ၎င်းသည် ASPs များမှတဆင့်ချိုးဖောက်ရန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုမဆိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်သောကျွမ်းကျင်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိအိုင်တီအဖွဲ့အများစုဖြစ်သည်။ ငါသူတို့လုပ်နိုင်သည်မှာသံသယမရှိပါ။ သို့သော်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏အစနှင့်အဆုံးသတ်သည့်နေရာတွင်ရပ်တန့်သွားသည်။
Restaurant Industry Online Ordering ရောင်းချသူများနှင့်ပြproblemနာမှာ၎င်းတို့သည်အနည်းငယ်သည်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ထက် ကျော်လွန်၍ ကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အမှတ် A မှအမှတ် B သို့မည်သို့သွားရကြောင်းပြanနာကိုဖြေရှင်းပြီးဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းမှမှာယူမှုရယူခြင်း POS လွယ်ကူသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည် 'စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်' ရှိနေသည်။ ခက်ခဲသောအစိတ်အပိုင်းများသော်လည်းလိုက်နာပါ
လျှောက်လွှာအသုံးပြုမှု၊ လိုက်ဖက်ညီမှု၊ အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်နှင့်အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စွန့်ခွာမှုနှုန်းလျှော့ချရန်အတွက်သုံးစွဲသူ၏မျက်နှာပြင်ကိုအမြင့်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
POS ပြ,နာများ၊ မီနူးပြ,နာများ၊ ဆက်သွယ်မှုပြ,နာများ၊ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာပြforနာများစသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအမိန့်များအားအရှိန်မြှင့်တင်ပေးခြင်း။
မွေးစားခြင်းအသစ်နှင့်လုံခြုံရေးလိုက်နာမှုအတွက်မှန်ကန်သောနည်းပညာများနှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုပေးသည့်စက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ မိုဘိုင်းအော်ဒါမှာအခုအချိန်မှာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ SMS တစ်စောင်ဖြင့်ပီဇာကိုဘယ်လောက်မှာယူခဲ့တာလဲ။ ဟုတ်ကဲ့၊
ပေါင်းစည်းမှုရန် analytics၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၊ pay-per-click ကြော်ငြာ၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများသည်မည်သည့် ecommerce platform အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သင်၏ 'ဆော့ဗ်ဝဲ' သည်သင့်အတွက်ဤအရာကိုပြုလုပ်နေသလား။ Nope ။ သို့သော်သင်၏ ASP ဖြစ်သင့်သည်။
ASP များသည်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းရည်များဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဝန်းရံလျက်၊ အကောင်းဆုံးသောရလဒ်များကိုရရှိရန်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးကိုအသုံးချသည့် application များကိုဆောက်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ASP များသည်လျင်မြန်ပြီးသူတို့၏အောင်မြင်မှုသည်သင်၏လုပ်ငန်း၏အောင်မြင်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။
ASPs ရဲ့နောက်ဆုံးအားသာချက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ software အတွက်အားသွင်းစရာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ASP များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် software ပေးသူများသည်လိုင်စင်မော်ဒယ်များပေးသော subscription model ကိုပေးသည်။ ခြားနားချက်ကဘာလဲ သငျသညျ software ကိုဝယ်ခြင်းနှင့် run ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းအလုပ်မလုပ်ပါက၎င်းကိုအလုပ်လုပ်ရန်သင့်အဖွဲ့အစည်းအနေနှင့်အကြီးအကျယ်မူတည်သည်။ ကံကောင်းပါစေ! ASP များနှင့်သင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုဖွင့်ပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်ပေးချေသည်။
ASPs သည်လျှောက်လွှာကိုမဟုတ်ဘဲ Client Leverage ကိုပေးပါ
စီးပွားရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီထက် Application Service Provider အပေါ်တွင်များစွာသြဇာသက်ရောက်စေသည်။ ဤအချက်သည် ASP အားသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြည့်စုံသောနည်းပညာများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်တွန်းအားပေးသည်။ ASPs တွေနဲ့ဒဏ္myာရီကတော့သူတို့ဟာအမြတ်ပိုများတယ်ဆိုတာပါ။ အလွန်ကြီးမားသော ASP များနှင့်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်အမြတ်သည်ဆော့ဖ်ဝဲလုပ်ငန်းနှင့်တန်းတူဖြစ်သည်ဟုငါပြောနိုင်သည်။
Tags: ချဒ် pollittချန်ပီယံလိဂ်Facebook Timelineရပါတယ်အထဲဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာအုပ်ဣဇာက်သည်kuno ဖန်တီးမှုမိုဘိုင်းအီးမေးလ် statsချစ်သူရောင်းသူ